သူငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝင်ရောက်ကြည့်ရူသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်၊ ၀ါသနာပါလို့ ဒီဆိုဒ်လေးမှာပါဝင်ရေးသားချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အကောင့်ဖြစ်တဲ့mglaminaung@gmail.com ကိုပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာ့စာပေသမိုင်းတွင်”သဒ္ဒါမှာ ရှင်မဟာကစ္စည်း၊ ကဗျာမှာ ရှင်မဟာသီလ၀ံသတည်း” ဟူ၍လည်းကောင်း”ပါရမီ မသီနှင့်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “တောင်းကိုမဖောက် တောင်ကိုဖောက်သည် စိန်ကျောက်အသွင် သီလ၀င်”ဟူ၍လည်းကောင်း ဥဒါန်းတွင်ခဲ့သော “ပေလေးပင် ရှင်လေးပါး” အ၀င်အပါ
ရှင်မသာသီလ၀ံသလောင်းလျာကို တောင်တွင်းကြီးမြို့၏မြောက်ဖက်ရှိ မြို့လုလင်ရွာ အရှေ့ပိုင်း၌ အဘဦးကြည်+အမိ(နတ်ထိန်းကြီး) ဒေါ်ဒွေးတို့မှ သက္ကရာဇ်-(၈၁၅) ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ ငယ်မည်ကား မောင်ညိုဖြစ်၏။ ရှင်ဥတ္တမကျော်လောင်းလျာ မောင်ဥက္ကာဖွားမြင်ပြီး (၆) ရက်မြောက်နေ့တွင် မောင်ညိုခေါ် ရှင်မဟာသီသ၀ံသလောင်းလျာကို ဖွာင်းမြင်တော်မူခဲ့ပြီး မောင်ဥက္ကာနှင့်မောင်ညိုတို့သည် တစ်ရွာတည်း တစ်ရပ်တည်း၊ တစ်ပိုင်းတည်းနေ သူငယ်ချင်းများများဖြစ်ကြသည်။ ပညာသင်ကြားသောအခါ၌လည်း တောင်တွင်းကြီးမြို့စား သီဟပတေ့ကြီး ဆက်ကပ်လှူဒါန်းသည့် ရတနာ့ဗိမာန်ကျောင်း နတ်မီးလင်းဆရာတော် အရှင်သီလာစာရာဘိဓဇ အထံတော်၌ အတူတကွအပ်နှံ ပညာသင်ကြခဲ့ကြသည်။ ရှင်သာမဏေဘောင်သို့ တတ်ရောက်သောအခါ၌လည်း သက္ကရာဇ်-(၈၀၃) ပြည့်နှစ်၊ အသက်-(၁၅) နှစ်အရွယ်တွင် နတ်မီးလင်းဆရာတော်အထံ၌ပင် အတူတကွ သာမဏေဘောင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဘွဲ့တော်တို့ကား မောင်ဥက္ကာသည် တနင်္ဂနွေသားဖြစ်၍ ရှင်ဥတ္တမ-ဟုလည်းကောင်း၊ မောင်ညိုသည် သောကြာသားဖြစ်၍ ရှင်သီလ၀ံသ-ဟုလည်းကောင်း ဘွဲ့အမည်တွင်လေ၏။ ရှင်ဥတ္တမနှင့်ရှင်သီသလ၀ံသတို့သည် နတ်မီးလင်းဆရာတော် အရှင်သီလာစာရဘိဓဇ-ထံတော်၌ပင် ပညာရင်နို့ သောက်စို့ခဲ့ကြသည်။ ရှင်သီလ၀ံသသည် ကျောင်းသားဘ၀ ငယ်စဉ်ကပင် ကျောင်းနေဘက်များအလယ်တွင် ခဏချင်းဖြင့် ကဗျာလင်္ကာကို စပ်ဆိုနိုင်သည်ဟု ထင်ရှားခဲ့သည်။ အခြေခံ ပညာပါရမီ ပါလာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အလျောက် ကျမ်းဂန်အရပ်ရပ်၌ တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တော်မူသည့်အပြင် ဆေးကျမ်း၊ ဓာတ်ကျမ်း၊ နက္ခတ်တာရာ အဖြာဖြာတို့ကို ကျွမ်းကျင်တော်မူပြီး ပျို့၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ ရတု၊ ရကန်၊ ရာဇ၀င်၊ သမိုင်းများပါမကျန် နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်တော်မူ၏။ စွယ်စုံတတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တစ်ပါးဖြစ်ပေသည်။ သက္ကရာဇ်-(၈၃၅) ခုနှစ်၊ အသက်(၂၀)ပြည့်သောအခါ ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူရာ ဘွဲ့တော်မှာ အရှင်မဟာသီလ၀ံသပင်ဖြစ်၏။ ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင် “ပေလေးပင် ရှင်လေးပါး” အ၀င်အပါ ရှင်ဥတ္တမ၊ ရှင်အုန်းညို၊ ရှင်ခေမာ တို့လည်း ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူကြကုန်၏။ အရှင်မဟာသီလ၀ံသ ရှေးဦးဆုံး စပ်ဆိုသီကုံးရေးသားတော်မူခဲ့သောစာပေကား “ဗောဓိမဏ္ဍိုင်၊ ခန်းဝါပိုင်က” အစချီသော “ပါရမီတော်ခန်းပျို့”ဖြစ်၏။ ပါရမီတော်ခန်းပျို့ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင်စတင်၍ရေးသားခဲ့သည်ကိုကား အတိအကျမသိရပေ။ သို့သော် ကျမ်းနိဂုံးတွင် သက္ကရာဇ်-(၈၅၃) ခုနှစ်တွင်ပါရမီတော်ခန်းပျို့ကို ရေးသားစီရင်ပြီးကြောင်း ပြဆိုထားပါသည်။ ပါရမီတော်ခန်းပျို့၌ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာကား ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည် သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀ဖြင့် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား အထံတော်မှ ဘုရားဖြစ်မည့်ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံယူတော်မူ၍ လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဖြည့်တော်မူရမည့် ပါရမီတော်များကို ဗုဒ္ဓ၀င်ပါဠိတော်မှထုတ်နှုတ်ကာစကားအလင်္ကာတန်ဆာဆင်၍ဖွဲ့ဆိုသီကုံးထားသောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပါရမီတော်များကို ခွဲခြားဝေဖန်၍ပြရာ၍ အခန်းကြီး(၁၀)ခန်းထား၍ ပါရမီတော်တစ်ပါးလျှင် တစ်ခန်းကျဝေဖန်ပြီး စီရင်သီကုံးဖွဲ့ဆိုထားကို တွေ့ရှိရ၏။ ဤပါရမီတော်ခန်းပျို့သည် လွန်စွာနက်နဲလှသည့်အပြင် ကဗျာဗန္ဓဖွဲ့ဆိုပုံ၌လည်း စကားအပိုအလိုမရှိ စေ့စပ်သိပ်သည်းလှသောကြောင့်” ပါရမီ မသီနှင့်” ဟူ၍ ရှေးရှေးပညာရှိကြီးများ ဆိုထုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကား-ပါရမီတော်ခန်းပျို့သည် စကားသိပ်သည်းပြေပြစ်၍ အဓိပ္ပါယ်လေးနက်ခက်ခဲလှသောကြောင့် ဤပျို့ထက် အလွန်ကောင်းမွန်အောင် နောက်နောက်ဆရာတို့ ရေးစပ်နိုင်ဖို့ရန် ဝေးစွ၊ ဤပျို့၏အဆင့်အတန်းကိုပင် မီအောင်ရေးနိုင်ကြမည်မဟုတ်။ တုပနှိုင်းယှဉ်ရန်ပင် ပါရမီတော်ခန်းပျို့အနားသို့ မကပ်မသီကြလေနှင့်-ဟူ၍ ဆိုလိုသတည်း။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် ကဗျာကို ကောင်းစွာပိုင်ပိုင် နိုင်နင်းသော စာဆိုအကျော်အမော်တစ်ပါးဖြစ်၏။ တရားအဆီအနှစ်များနှင့်ပြည့်ဝသော ဤပျို့သည် စုလစ်မွန်းချွန်တပ်ဆင်ထားသော နန်းတော်အဆောက်အအုံတို့နှင့်တူလှပေ၏။ စာဆိုအရှင်သည် ပါဠိ-အဋ္ဌကထာတို့၌ လွန်စွာကျွမ်းကျင်သည့်အားလျော်စွာမိမိကျွမ်းကျင်သောအတတ်ဖြင့် ကဗျာအဆောက်အအုံကြီးကို အလင်္ကာတန်ဆာဆင်ယင် ဖွဲ့ဆီသီကုံးရေးသားတတ်သောကြောင့် “သဒ္ဒါမှာ ရှင်မဟာကစ္စည်း၊ ကဗျာမှာ ရှင်မဟာသီလ၀ံသတည်း” ဟူ၍ ရှေးပညာရှိကြီးများက ဆိုထုံးပြုထားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏။ ဤသို့ ကဗျာ အဆောက်အအုံကြီးကို မွမ်းမံခြယ်လှယ်ရာ၌သ လောက၊ ဓမ္မ၊ တို့တွင် ဓမ္မအကြောင်းဘက်ကို ပို၍အားသန်ပုံရ၏။ ဓမ္မအကြောင်းဘက်က ပိုမိုပြည့်ဝသည်ကိုတွေ့ရှိရပေ၏။ ပါရမီတော်ခန်းပျို့ကျမ်းကြီးကို စေ့စပ်သေချာစွာ နားလည်ထားရှိသူသည် အခြားကျမ်းငယ်များကို နားလည်နိုင်ဖို့ရန် မခဲယဉ်းတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဤပါရမီတော်ခန်းပျို့ကြီးသည် ကဗျာ့ဘဏ်တိုက်ကြီးနှင့်လည်းတူလှပေ၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် ပါရမီတော်ခန်းပျို့ကို ရေးသားပြီးစီးသည့်နောက် တစ်နှစ်ကျော်အကြာ၌ ပညာကိုဆည်းပူးစုဆောင်း၍ အားမရနိုင်သေးရကား ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရာ အင်းဝသို့ကြွရောက်လိုသောဆန္ဒရှိသဖြင့် မိမိဆရာတော်ကလည်း ခရီးလမ်း ကြမ်းတမ်းသည်က တစ်ကြောင်း၊ ညာလက်ရုံးကဲ့သို့ အားကိုးရသောတပည့်ကြီးတစ်ယောက် ထွက်ခွါသွားခဲ့လျှင် တောင်တွင်းကြီးမြို့တွင် အားလျှော့ဖွယ် ဖြစ်နေတော့မည်က တစ်ကြောင်းကြောင့် တွေးတောစိုးရိမ်မိ၍ အင်းဝသို့မသွားရောက်ရန် အတန်တန်တားမြစ်ပါသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် သွားခွင့်ပြုလိုက်လေတော့၏။ (မှတ်ချက်-ဒီနေရာမှာ အချို့ဆရာတို့ကား ရှင်မဟာသီလ၀သံအား ရဟန်းတန်မဲ့နှင့် ကဗျာဖွဲ့သည်-ဟု အပြစ်ဆိုပြီးလျှင် နတ်မီးလင်းဆရာတော်က ကျောင်းမှနှင်ချလိုက်သည်-ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုဆိုသည် မခိုင်လုံကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော အင်းဝမြို့သို့သွားရန် ရှင်သီလ၀ံသက တောင်းပန်သောအခါ ဆရာတော်က တားမြစ်တော်သေးကြောင်းကို ရှင်မဟာသီလ၀ံကကိုယ်တော်တိုင် ရေးသားထားသော “ တောင်တွင်းလာပျို့” တွင် ရေးသားထားကို ထောက်ရှုနိုေ်သောကြောင့်ပင်တည်း)။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် ဆရာတော်၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး၍ သက္ကရာဇ်-(၈၅၄)ခုနှစ်တွင်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် အင်းဝရျွှေမြို့တော်သို့ ကြွတော်မူခဲ့သည်။ အင်းဝရွှေမြို့တော်သို့ရောက်ကာစ ဘုရင်မင်းခေါင်ထံသို့ မေတ္တာစာများရေးသားဆက်သွင်းသည်တွင် ဘုရင်မင်းခေါင်က စေတနာထက်သန် ကြည်ညိုတော်မူလှသဖြင့် ရှင်မဟာသီလ၀ံသ စီရင်တော်မူသော ပါရမီတော်ခန်းပျို့နှင့် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ စီရင်တော်မူသော ဘူရိဒတ်လင်္ကာကြီး၊ ဘူရိဒတ်ဇာတ်ပေါင်းပျို့များကို ယှဉ်ပြိုင်ကြားနာ၍ စာပွဲသဘင်ကြီး ကျင်းပတော်မူစေသည်။ စာပွဲသဘင်ကြီးကျင်းပ၍ အဆုံးတွင် ဒုတိယမင်းခေါင်က ပါရမီတော်ခန်းပျို့ကဗျာက ကောင်းလှကြောင်း နေပြည်တော်ဆရာ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရအား လျှောက်ထားရာ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရက “ပါရမီတော် မည်သို့ပင် ဖြည့်ဆည်းပူးသော်လည်း ဆုတောင်းဦးမှ ဘုရားဖြစ်နိုင်သည်-တကာတော်မင်းမြတ်” ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုသို့ မိန့်မြွတ်တော်မူသွားသည်ကို ရှင်သီသ၀ံသကြားသိတော်မူရာ မိမိနေထိုင်ရာကျောင်းတော်သို့ ပြန်ကြွပြီးလျှင် “ဆုတောင်းခန်းပျို့” ကို သုံးရက်နှင့်အပြီး ရေးသားစီကုံးတော်မူလေ၏။ ဆုတောင်းခန်းပျို့ပါ စကားရပ်များမှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာမှပြန်၍ရေသော် လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်းထက်တွင် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော် သုမေဓာပုဏ္ဏားဘ၀နှင့် နုစဉ်အခါက ကုဋေအရာမက များပြားလှစွာသော ဥစ္စာပစ္စည်း အခြွေအရံတို့ကို စွန့်ပစ်တော်မူပြီး တောထွက်၍ ရသေ့ရဟန်းပြုတော်မူပြီးလျှင် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူ၍ ရမ္မ၀တီပြည်သို့ ကြွတော်မူလာသောကာလ လမ်းခရီးတွင် တာငန်းပြု၍ ပူဇော်အံ့သောငှာကြိုးစားပါသော်လည်း တာငန်းမပြီးဖြစ်နေလေ၏။ ထိုအခါ မိမိကိုယ်ကို တံတားခင်း၍ ဘုရားဆုကိုတေင်းယူတော်မူခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ဗုဒ္ဓ၀င်ပါဠိတော်မှ ထုပ်နှုတ်၍ မြန်မာကဗျာဖြင့် တန်ဆာဆင်စီရင်သီကုံး ဖွဲ့ဆိုရေးသားထားပေ၏။ ဤ “ဆုတောင်းခန်းပျို့”သည် သုံးရက်နှင့်အပြီးရေးသားသောပျို့ဖြစ်သော်လည်း လေးနက်ခန်းနားသော စကားလုံးအသုံးအနှုံးများကို “ပါရမီတော်ခန်းပျို့” တွင်တွေ့ရှိရသကဲ့သို့ပင် ပါဠိတော်စကားလုံးများကို အကျယ်ချဲ့၍ ခက်ခဲနက်နဲအောင် ဖွဲ့ဆိုသီကုံးနိုင်သော စာဆိုအရှင်ကို ချီးမွမ်းထိုက်လှပေ၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် “သံဝရပျို့၊ ဗုဒ္ဓုပ္ပတ္တိပျို့၊ ဓမ္မပါလပျို့” (မှတ်ချက်= ဓမ္မပါလပျို့ကိုရေးဆဲ မပြီးမီ သက္ကရာဇ်-(၈၈၂)ခုနှစ်၊ ရှင်မဟာသီလ၀ံသမထေရ် သက်တော်-(၆၇)ခုနှစ်တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သောကြောင့် တပည့်ဖြစ်သော ပုဂံဆရာတော်က ဆက်လက်ရေးသား၍ သက္ကရာဇ်-(၉၁၁)ခုနှစ်တွင် ထိုပျို့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်)။ တို့ကိုလည်း ရေးသားစီရင်တော်မူခဲ့သည့်အပြင်လူအများအသိခက်ခဲသောပျို့တစ်စောင်ကိုလည်းရေးသားခဲ့သေးသည်။ ထိုပျို့ကား “တောင်တွင်းလာပျို့” ဟူ၍ ကျော်ကြားပါသည်။ ဉာဏ်ကစားရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားခဲ့ဟန်တူပါသည်။ ထိုပျို့သည် အင်းဝနေပြည်တော်သို့ရောက်မှ စပ်ဆိုသောပျို့ဖြစ်၏။ တောင်တွင်းကြီးမှ အင်းဝနေပြည်တော်သို့ ထွက်လာရခြင်းအကြောင်းကို ရေးသားထားသဖြင့် “တောင်တွင်းလာပျို့” ဟူ၍ အမည်တွင်လေ၏။ ဤပျို့၌ စာဆိုအရှင်သည် မိမိတွေ့ကြုံခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များကိုလျှို့ဝှက်သိုသိပ်၍ထားသော ပဟေဠိစကားများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားရကား ရှေးပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ပညာရှိကြီးတို့ပင် ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို သေချာကျနစွာ မပြန်ဆိုနိုင်သဖြင့် ဤပျို့သည် ကတ္တီပါစသည်ဖြင့် ဖုံးအုပ်၍ထားသော ရှင်သီလ၀ံသ၏ ရုပ်ပုံဓာတ်ကားနှင့် တူလှပေ၏။ ကတ္တီပါစသည်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သူသည် အရှင်မဟာသီလ၀ံသ၏ ရုပ်ပုံကားကို တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ ထိုတောင်တွင်းလာပျို့စကားလုံးတို့ကို အဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင် ဖွင့်လှစ်နိုင်သူသည် ရှင်မဟာသီလ၀ံသ၏ အကြောင်းကို သနစ်ကုန်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်၏။ ထိုပျို့၏အနက်ကို ၁၀၉၇-ခုနှစ်တွင် ဆားလင်းဆရာတော်က ဖွင့်လှစ်ပြဆိုခဲ့သေး၏။ ထိုတောင်တွင်းလာပျို့သည် ရှင်မဟာသီလ၀ံသမထေရ် အင်းဝသို့ကြွရန် နတ်မီးလင်းဆရာတော်အား အခွင့်ပေးပါမည့်အကြောင်း အခွင့်တောင်းရာ အခွင့်ရသည်ဖြစ်၍ နောက်ဆုံးတွင် အင်းဝရွှေမြို့တော်သို့ ကြွလာတော်မူကြောင်း ဖွဲ့ဆိုရေးသားထားခြင်းဖြစ်၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် သက္ကရာဇ်-(၈၅၈)ခုနှစ်၊ ဒုတိယမင်းခေါင်လက်ထက်တွင် “တံတားဦးတည်မော်ကွန်း” ကို ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့၏။ “တံတားဦးတည်မော်ကွန်း” ဟု အမည်မှည့်ရခြင်းကား တံတားဦးအရပ်၌ ဒုတိယမင်းခေါင် တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော မင်္ဂလာစေတီတော်ကို ဖွဲ့ဆိုသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည်လည်း “ တံတားဦးတည်မော်ကွန်း” တစ်စောင်ကို ဖွဲ့ဆိုသေး၏။ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရက ရှင်မဟာသီလ၀ံသထက် အရေးအသားလက်ဦးကျပြီးစောာဟန်တူပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် တံတားဦးတည်မော်ကွန်းကိုရေးသားပြုစု၍ (၁၂)ပုဒ်မျှ ပြီးစီးသည့်ကာလ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရက ရေးသားစီရင်ပြီးဆုံးကြောင်းကိုကြားသိရ၍ ဆက်လက်မရေးသားတော့ပဲ ပုရပိုက်ပေါ်တွင် ရေးသားပြီးနေသော(၁၂)ပုဒ်ကို ချေဖျက်စေသည်တွင် တပည့်ရဟန်းများက ကူးယူသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြ၏။ ထိုမော်ကွန်း၌ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ သည် ဒုတိယမင်းခေါင်အား ဗုဒ္ဓအလောင်းလျာသဖွယ်ထား၍ ခမ်းနားနက်နဲသော စကားဥပမာ တို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ကာ ရေးသားဖွဲ့ဆိုထားပေ၏။ ဥပမာတင်းထားပုံမှာ အလွန်ကောင်းမွန်လှသဖြင့် ရှင်မဟာသီလ၀ံ၏ ကဗျာအာဘော်ကိုမီအောင်ပင် နောက်ဆရာတို့မလိုက်နိုင်ကြတော့ပေ။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် ဤမော်ကွန်းအပြင် “သျှိသျှားမိတ္ထီလာကန်တော်ဘွဲ့မော်ကွန်း၊ ရွှေနန်းတည်မော်ကွန်း” တို့ကိုလည်း ရေးသားစီရင်ခဲ့သေး၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် စကားပြေကျမ်းများကိုလည်း ရေးသားစီရင်ပြုစုတော်မူခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရွှေနန်းကြော့ရှင်လက်လက် သက္ကရာဇ်-(၈၆၃) ခုနှစ်တွင် “ပါရာယန၀တ္ထု”ကို စီရင်ရေးသားတော်မူခဲ့၏။ ပါရာယန-ဟူသည် ကမ်းတစ်ဖက်သို့သွားရာလမ်း(သို့မဟုတ်) နိဗ္ဗာန်သို့သွားရာလမ်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ သံသရာ၏ ကမ်းတစ်ဖက်ဖြစ်သော-နိဗ္ဗာန်သို့သွားစရာ ခရီးလမ်းသဖွယ်ဖြစ်သော ကျင့်ဝတ်တရားတို့ကို သက်သေ သာဓကများနှင့်တကွ ညွန်ပြသောဝတ္ထူဖြစ်သောကြောင့်လည်း “ပါရာယန၀တ္ထု” ဟု အမည်တွင်လေ၏။ ဤပါရာယန၀တ္ထုသည် ဘုရားဟောဓမ္မက္ခန္ဓာအပေါင်းတို့မှ ကောင်းနိုးရာရာတို့ကို ထုတ်နှုတ်စိစစ်၍ မြန်မာစကားပြေသွားဖြင့် ဖွဲ့နွဲ့စီကုံးရေးသားထားသောကျမ်းဖြစ်သည်။ ဤ၀တ္ထုတွင် ပါဠိဘာသာစကားများကို နည်းပါးနိုင်သလောက် နည်းပါးစေသည့်အပြင် ရွေးကောက်ထုတ်နှုတ်ပြသော စကားများမှာလည်း လူအများသတိတရားရဖွယ် သံဝေဂဖြစ်ဖွယ်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသဖြင့် အများအကျိုးရှိမည့် ၀တ္ထုကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်၏။ ထင်ရှားတွေ့ရှိရသမျှသော မြန်မာစကားပြေ၀တ္ထုများတွင် “ပါရာယန၀တ္ထု” သည် ရှေးအကျဆုံး အဟောင်းဆုံးဝတ္ထုဖြစ်ပါသည်။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် ရာဇ၀င်ကျမ်းကိုလည်း ရေးသားပြုစုခဲ့၏။ သက္ကရာဇ်-(၈၆၄) ခုနှစ်တွင် ရာဇ၀င်တစ်စောင်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့ရာ ယခုအခါ “ရာဇ၀င်ကျော်” ဟူ၍ အမည်တွင်လေသည်။ “ရာဇ၀င်ကျော်” ဟူသောအမည်မှာ ရှင်မဟာသီလ၀ံသမထေရ် မှည့်ခဲ့ရင်းအမည် မဟုတ်ပေ။ နောက်မှခေါ်ကြသောအမည်ဖြစ်၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသမထေရ် မှည့်ခဲ့သောအမည်ကား “မဟာသမ္မတ၀ံသကျမ်း” ဟူ၍ဖြစ်၏။ ထိုရာဇ၀င်ကျော်ကျမ်းသည်လည်း ထင်ရှားတွေ့ရှိရသမျှသော ရာဇ၀င်ကျမ်းများတွင် အစောဆုံး၊ အဟောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ဤကျမ်းကိုပြုစုရာ၌ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် မိမိဉာဏ်စွမ်းဖြင့် စကားသစ်၊ စကားဆန်းများ စိစစ်ဝေဖန်ရေးသားခြင်း များစွာမပြုပဲ ပါဠိဘာသာဖြင့်ရှိသော “မဟာဝင်ကျမ်း” ကိုမြန်မာဘာသာ နိဿယပြန်ဆိုရေးသားခြင်းမျှသာဖြစ်၏။ ထိုရာဇ၀င်ကျမ်းကြီးကို မဇ္ဈိမရာဇ၀င် (ကမ္ဘာဦးသမ္မတမင်းမှ ဓမ္မာသောကမင်းအထိ)၊ သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ) ရာဇ၀င် (၀ိဇယမင်းမှ မဟာနန်မင်းအထိ)၊ မြန်မာရာဇ၀င် (ဒွတ္တဘောင်မင်းမှ အင်းဝ မဟာသီဟူရမင်းအထိ)-အားဖြင့် သုံးပိုင်းခွဲ၍ မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ဤရာဇ၀င်ကျမ်း၏ လေးပုံသုံးပုံခန့်မှာ မဇ္ဈိမရာဇ၀င် အကြောင်းအရာများသာဖြစ်၍ ကျန်တစ်ပုံမှာခန့်သာလျှင် သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ) ရာဇ၀င်နှင့်မြန်မာရာဇ၀င်အကြောင်းအရာပါဝင်လေ၏။ မြန်မာရာဇ၀င်ကိုရေးသားရာ၌လည်း မင်းဆက်အစီအစဉ်များကိုသာ ဖော်ပြ၍ ထိုမင်းများလက်ထက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုကား မြှုပ်၍ချန်လှပ်ထားခဲ့သည် တွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်ခါသော ရွှေနန်းတော်အတွင်းဝယ် ဒုတိယမင်းခေါင်က မိမိကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ပူဇော်ထားသည့် ရှင်မဟာသီလ၀ံသမထေရ်မြတ်နှင့် နေပြည်တော်ဆရာတော် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရမထေရ်မြတ်နှစ်ပါးတို့အား “အရှင်တို့ဂုဏ်ပုဒ်များကို ချီးကျူး၍ကြွတော်မူကြပါ” ဟု လျှောက်ထားရာ ရှေးဦးစွာ နေပြည်တော်ဆရာတော် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရက “တောင်းကိုမဖောက်၊ တောင်ကို ဖောက်၊ စူးဆောက်ပမာ-ရဋ္ဌသာ” ဟူ၍ မိန့်ကြားပြီး ကြွသွားတော်မူ၏။ ထို့နောက် ရှင်မဟာသီလ၀ံသမထေရ်မြတ်ကလည်း “တောင်းကိုမဖောက်၊ တောင်ကိုဖောက်၊ စိန်ကျောက်အသွင်-သီလ၀င်” ဟု မိန့်ကြားတော်မူပြီး ကြွသွားတော်မူလေ၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသသည် အဖက်ဖက်မှ စွယ်စုံတော်တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်တော်မူရကား ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ အပေါင်းတို့က “ သီလ၀ံသ” ဟူသောဘွဲ့တော်ရှေ့တွင် ‘မဟာ’ ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်တပ်၍ “ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ” ဟု ယခုတိုင် ခေါ်ဝေါ်ကြလေ၏။ မြန်မာ့စာပေသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင့်လည်း “ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ” ဟူ၍ သမိုင်းထိုး မော်ကွန်းတင်ခဲ့ကြလေ၏။ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ စာဆိုအကျော်မထေရ်မော် ရေးသားပြုစုခဲ့သောကျမ်းများမှာ---
(၆) တံတားဦးတည် မော်ကွန်း၊
(၇) ရွှေနန်းတည် မော်ကွန်း (ရွှေနန်းဘွဲ့ မော်ကွန်း)
(၈) သျှိသျှား မိတ္ထီလာကန်တော်ဘွဲ့ မောက်ကွန်း၊
(၉) ရှင်မဟာသီလ၀ံသ ဆုံးမစာ( ဆုံးမစာ စကားပုံ)၊
(၁၄) မဟာသမ္မတ၀ံသကျမ်း (ရာဇ၀င်ကျော်)
(၁၆) မဟာရဟနီတိကျမ်း (ပါဠိဘာသာ)
ပျို့၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ မော်ကွန်း၊ -စသောကျမ်းဂန်များစွာကို ပြုစုစီရင်တော်မူသော စွယ်စုံတတ်မထေရ် ရှင်မဟာသီလ၀ံသ သည် သက္ကရာဇ်-(၈၈၂) ခုနှစ်၊ သက်တော်-(၆၇)နှစ်၊ သိက္ခာတော်-(၄၇) ၀ါအရ ဓမ္မပါလပျို့ကိုရေးသားပြုစုဆဲ မပြီးဆုံးသေးမီ ပျံလွန်တော်မူခဲ့လေသည်။
♥♥ရေးသူ♥♥ LA MIN AUNG ♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 11:03 PM0comments
စာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိကျမ်းကို ပြုစုသော ကျမ်းဆရာ၏ အဆိုအရ ဆရာတော် သည် သတိုးမင်းဖျား၏ အနွယ်တော် ဖြစ်ကြောင်းမျှကိုသာ အတည်ပြုဖော်ပြထား၏။ ဤသို့ အတည်မပြုနိုင်ခြင်းမှာလည်း ကိုးခန်းပျို့ နိဂုံးလာသမီးဖြစ်ရင်း ဟူသော ပုဒ်၌ မူကွဲများတွင်အရီးမြစ်ရင်း၊ နွယ်မယွင်း ဟုလည်းကောင်း၊ဦးရီးမြစ်ရင်း နွယ်မယွင်း ဟုလည်းကောင်း အသီးသီး ရှိနေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရလောင်းလျာ မောင်မောက်သည် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ နန်းတော်သို့ ဖခင်ကြီးနှင့်အတူ လိုက်ပါ၍ နေလေ့ရှိခဲ့၏။ ဘုရင်မင်းခေါင်ကိုယ်တိုင်လည်း မောင်မောက်အား တစ်အူတုံဆင်း ညီငယ်ရင်းကဲ့သို့ အောက်မေ့၍ ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့၏။ ငါးနှစ်သားအရွယ်မှာပင် ထီးမှုနန်းရာတို့ကို ကျွမ်းကျင်ခြဲ့ပီဟု ဆိုနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် မိမိရေးသားသော ပျို့နိဂုံးများတွင်-ရွှေနန်းတော်ထက်၊ ငါးနှစ်သက်က၊ လေ့ကျက်ခဲ့မြောက်၊ (ကိုးခန်း) ရတနာပူရ၊ ပြည်မတန်ဆောင်၊ တံခွန်ထောင်သား၊ မင်းခေါင်လက်ထက်၊ ပျိုရွယ်သက် က၊ ဝမ်းထွက်စတေ၊ မှတ်သောထွေဖြင့်၊ စာပေသင်ကာ၊ နေလှည့်ရာတွင်၊ (သံဝရ) စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းရေးစပ်ခဲ့၏။
ဒုတိယမင်းခေါင်လည်း ထိုအခါက ခုနစ်နှစ်ကျော် ရှစ်နှစ်အရွယ်မျှသာ ရှိပေသေးသည်။ ဤသည်ကို ရည်၍ ဆရာတော်သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရကနန်းထက်သမီး၊ စောင့်စည်းသီလ၊ ဒါန ဖြည့်ဆည်း၊ ရှစ်နှစ်တည်းက၊ ခမည်းတော်မင်း၊ မယ်တော်နှင်းသား၊ ဟူ၍ စပ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဆရာတော်သည် မိမိကိုယ်ကို ရည်ညွှန်း၍ စပ်ဆိုခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်လောင်းလျာ မောင်မောက်ကို မင်းတရားထံ မွေးစားရန် အပ်နှံသည်ဟူသော အဆိုမှာ လျော်ကန်တော့သည် မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြထားလေသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရင်မင်းခေါင်သည် မောင်မောက်အား ဝမ်းထွက်သားကဲ့သို့ ချစ်ခင်ယုယစွာ စောင့်ရှောက်ကြောင်းကိုကား ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော အဖွဲ့များဖြင့် ထင်ရှားလေသည်။
မောင်မောက်သည် မည်သည့်ခုနှစ်တွင် သာမဏေဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဟု အမှတ်အသား မတွေ့ရပေ။ ဘူရိဒတ်လင်္ကာကြီးကို ရေးသားချိန်တွင်အမူ လူ့ဇာတိ လူ့အဖြစ်နှင့် သာ ရှိနေပေသေးသည်။ သံဝရပျို့ နိဂုံး၌ ခပ်သိမ်းဒါန၊ အနန္တကို၊ ဓမ္မအလှူ၊ အောင်သောဟူသည်၊စိတ်ယူတည်ဘိ၊ လူ့ဇာတိက၊ ဘူရိဒတ္တ၊ ဆိုစပြီးမြောက်၊ ဟု ရေးဖွဲ့ထားသောကြောင့်မောင်မောက်သည် ၁၆-နှစ်အရွယ် လူပျိုပေါက်သည်အထိ သျှင်သာမဏေဘောင်သို့ မဝင်ရသေး ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ စာဆိုတော်များအတ္ထုပ္ပတ္တိကျမ်း၌မူ မောင်မောက်သည် ၁၉-နှစ်ကျော် ၂ဝ-တွင်း၌ လူ့ဘဝ လူ့ဇာတိမှ တစ်ခါတည်း ရဟန်းဘောင်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု မှတ်ချက် ချထား၏။ သို့ရာတွင် ခိုင်လုံသော အထောက်အထား မတွေ့ရပေ။
ဤသို့ဖြင့် သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရလောင်းလျာသည် ရဟန်းပြုရန် အချိန်အရွယ်သို့ ရောက် ရှိလာခဲ့၏။ ထိုအခါ ကျွန်းတွင် ဇမ္ဗူလုံး၊ ပြိုင်တိုင်းရှုံးသည်၊ ပြစ်လုံးကင်းစင်ကွာ၊ မိုးသူဇာကိုပစ်ခွာထားခဲ့ရတော့မည်။ တစ်ချိန်ကဆိုလျှင် ဝဏ္ဏပဘာ လှကလျာ ငယ်ကျွမ်းဝင်နှင့်၊သို့ပင်တာရှည၊် ပျော်ရမည်ဟု လည်း မှတ်ထင်ခဲ့မိသဖြင့် ခက်မတစ်ထောင်၊ ပညောင်စောင့် နတ်၊ ရှင်နတ်မြတ်ကို ပင် ခိုင်မြဲစေမှုအတွက် သက်သေပြုခဲ့ကြဖူးသည်။ ဘယ်သို့ပင် ချစ်စထုံး နှောင်၊ ပျော်ရအောင်ဟုရည်ရွယ်ထားပါသော်လည်း သာသနာတော်ရေးအတွက် ရဟန်းဘောင် သို့ တက်ရောက်ရတော့မည့် အခါတွင် ချီတုံ ချတုံ အာရုံထွေပြားလျက် စိတ်သောက ပွားခဲ့ရပေ သည်။
ဤသို့ သာသနာရေးက တစ်ဖက်၊ အချစ်ရေးက တစ်ဖက်နှင့် စိတ်ဝိတက်များပြားနေ ရချိန်တွင် ငြိ်မ်သက်စွာ စိတ်ကို ထိန်းသိမ်းတော်မူလျက်သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းမြတ်ဘဝနှင့်မာတုဂါမတို့သည် မအပ်စပ်စွတကား၊ ဟု တရားသံဝေ ယူတော်မူချေ၍ သာသနာရေးကို အနိုင်ပေးခဲ့ရှာသည်။ ဝဏ္ဏပဘာ၊ ကလျာဖူးစသစ်၊ ပျိုမျစ်မျစ်ကို ကြေကွဲစွာ ခွဲခွာတော်မူ၍ ရဟန်းဘဝ ကိုသာ ရယူတော်မူခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို ရဟန်းဘဝ ရယူတော်မူပြီးသည့်နောက်၌ စပ်ဆိုတော်မူသော ' ပုရေနိသင် ' အစချီ ရတုပိုဒ်စုံတွင်-
သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည် မိမိကိုယ်ကို တရားချ၍ ရဟန်းဘဝကို ရယူခဲ့သော်လည်း အလွမ်းဖြေ မပြေနိုင်ခဲ့ရှာပေ။ ထို့ကြောင့်လည်း စိတ်ပြေရာ ပြေကြောင်း အောက်မေ့၍ လူလည်း တစ်ထွေ၊ ရေလည်းတစ်ခြား၊ ဖျားလည်းတက်သက်၊ ကြောက်မက်ချင်ဖွယ်၊ ပင်လယ်ချောင်းမြောင်း၊ မကြီးတောင်းတည့်၊ ဆောင်းဆောင်းဆိုင်းဆိုင်း၊ ပြိုင်းရရိုင်းတည့်၊ မှိုင်းမှိုင်းအုပ်ထွေ၊ ဝေဝေမို့မို့၊ ညို့ရရို့နှင့်၊ မြသို့ရှိန်းရှိန်း၊ ခပ်သိမ်းတောတောင်၊ ကုန်အောင်ပတ်ကုံး၊ မျှော်မဆုံး သည့် ရခိုင်တောင်ကုန်းဒေသဆီသို့ ခရီးထွက်ခဲ့လေသည်။ ရခိုင်ပြည်သို့ ရောက်ရှိသည်တွင် ' နှစ်ကူးလည်၍၊ မိုးစည်ပျံ့ ပျူး၊ ' အစချီ ရတုပိုဒ်စုံကို ရေးသားတော်မူသည်။
အထက်ပါစကားကို သတိထား၍ လေ့လာလျှင် ချွတ်ယွင်းချက်များကို တွေ့ရမည် ဖြစ်၏။ ထိုရေးသားချက်အရ ၈၄၂-ခု၊ ဒုတိယဘုရင်မင်းခေါင်လက်ထက် သိမ်သမုတ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်း ရှိ၏။ ၈၄၂-ခုနှစ်တွင် သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည် ရဟန်းဘောင်သို့ ရောက်နိုင်သော အရွယ်လည်း မဟုတ်သေး။ ဆရာတော်သည် ၈၃ဝ-ပြည့်ဖွား ဖြစ်၍ ၁၂-နှစ်အရွှယ်မျှသာ ရှိပေသေးသည်။ သို့မဟုတ်ဘဲသက္ကရာဇ် ၈၄၂-ခုနှစ်တွင် နန်းတက်သော ဒုတိယဘုရင်မင်းခေါင် လက်ထက် ဟုဆိုလျှင် လက်ခံသင့်သကဲ့သို့ ရှိ၏။ သို့တိုင်အောင် ရဟန်းငယ်ကလေးမျှသာဖြစ် သော သျှင်ရဋ္ဌသာရအား သက်တော် ဝါတော်ကြီးမားသော ဆရာတော်ကြီးများက အလေးဂရုပြု ကာ ဖယ်ရှားနေလမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
မည်သို့ရှိစေ သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရတို့ ခေတ်တွင် စာပေဖွဲ့နွဲ့မှုကို ယုံကြည်ကိုးစားသူလည်း ရှိမည်။ ပယ်မြစ်ကန့်ကွက်သူလည်း ရှိမည်။ ဤသည်မှာ လောကနိယာမ သဘောအရ ဖြစ်သည်။ သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရဆရာတော်ကလည်း ဤကဲ့သို့ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းသဘောကို သိတော်မူသည် သာတည်း။ သို့သော်လည်း ဘုရားလူ့ဘ၊ မုနိန္ဒလျက်၊ မိန်းမယောက်ျား၊ လူ့စကားဖြင့်၊မကြားစကောင်း၊ မနာတောင်းကို၊ အကြောင်းဆောင်သွေး၊ ဟောတုံသေး သဖြင့် ချီးမွမ်းမှု၊ ကဲ့ရဲ့မှုတို့ကိုကြည့်ရှုတော် မမူအားဘဲ လူ့အကျိုး လူ့စာရိတ္တအတွက် အတွေးလည်း မပျက်ခဲ့။ အရေးလည်း မပျက်ခဲ့။ ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်သည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
ဤကဲ့သို့ ဇာတ်တော်ကြီးများကို ဖွဲ့ဆိုရာမှာလည်း ပညာရှင်ကြီးများအတွက်ဟူ၍ ဝန် ခံတော် မမူပေ။ စာကြီးပေကြီးများကို မဖတ်ရှုနိုင်သူ နုနယ် ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အထူးအားဖြင့် ရည်ညွှန်းရေးသားထား၏။ ဆရာတော်သည် ငါ၏ စာသည် ငါ့အောက် အသိပညာငယ်သောနုနယ်သူများအတွက် အသ်ိပညာပြန်ပွားကာ အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းကို ဆောင်နိုင်ပါစေ၊ ဟူသော စေတနာဖြင့် ရေးသား ဖွဲ့ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဆရာတော်ကလည်း- လူတို့နားတွင်း၊ မိုက်မလင်းကို၊ ဝင်းဝင်းထွန်းညီး၊ Óဏ်ဆီမီးဖြင့်၊ မှောင်ကြီးကင်း ပျောက်၊ ငါ့စာရောက်က၊ ငါ့အောက်ပညာ၊ နုသေးစွာသား၊ သမ္ဘာမပြန့်၊ လူအဝှန့်အား၊ စိတ် ပြားပညာ၊ ပွားပါလိမ့်မည်၊ သူတို့ရည်၍၊ သာကြည်ရွှင်လန်း၊ လင်္ကာညွှန်း -ရပါကြောင်း ဝန်ခံတော်မူခဲ့လေသည်။
ဆရာတော်သည် ဒုတိယဘုရင်မင်းခေါင်၏ ဆန္ဒတော်ကို ဘုရင်မင်းမြတ် မရှိသည့် နောက် နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှ ကိုးခန်းပျို့ဖြင့် ရေးစပ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လေတော့သည်။ အသက် ၂၅-နှစ်ခန့်ကပင် တောင်းပန်ထားခဲ့သော်လည်း မရေးသားနိုင်ခဲ့သဖြင့် ကိုးခန်းပျို့ကို ရေးသားပြီးချိန် တွင် ဆရာတော်သည် မင်းခေါင်နှင့် မိဖုရားတို့အား အမှတ်ရ တမ်းတမိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာ တော်သည် ကိုးခန်းပျို့ကြီးကို မကြားနာနိုင်တော့ပြီဖြစ်သော မင်းနှင့် မိဖုရားတို့အားငါသည် ဤစာကိုးခန်းကို ပြုစု၍ ရအပ်သော ကုသိုလ်အဖို့ကို အမျှဝေငှပါသည်၊ ငါ၏ ဒါယကာ မင်းမျိုး ဆွေစုံတို့သည် ရောက်လေရာ ဘုံဗိမာန်မှ အမျှယူကြပါစေ၊ ဟူ၍ ကုသိုလ်အမျှကို ဝေငှတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ကို ရည်၍ ကိုးခန်းပျို့နိဂုံး၌-
ထိုအခါ ဆရာတော်သည် ကိုးခန်းပျို့ကြီးကိုလည်း ဆောင်ယူလိုသဖြင့် တပည့်များထံ မှ သိမ်းဆည်းတော်မူခဲ့ရာ ရှစ်ခန်းကိုသာ ပြန်လည်ရရှိ၍ ဇာတ်ပေါင်းခန်းဖြစ်သော နဝမခန်းကိုကား မရရှိခဲ့ပေ။ ထိုရှစ်ခန်းကိုသာ ယူဆောင်၍ ပြည်ဘုရင်ပင့်ဆောင်ရာ အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ လိုက်ပါတော်မူခဲ့ရလေသည်။ ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိသည်တွင် သတိုးမင်းစောက ဆရာတော်နှင့် မင်းသမီး သီရိဘုန်းထွတ်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ အင်းဝကို ငါချီတော်မူသည်တွင် သျှင်တစ်ဆူ လူတစ်ယောက်လည်း ရခဲ့သည်၊ ဟု ကြိမ်းပတော်မူလေသည်။
ပြည်ဘုရင် သတိုးမင်းစောသည် မိမိပင့် ဆောင်လာသော ဆရာတော်အား ပြည်မြို့မှ ဆရာတော် ပညာကျော်များနှင့် မိတ်ဆက်လို၍လည်းကောင်း၊ ဆရာတော်၏ အရည်အသွေးကို သိစေချင်၍လည်းကောင်း တစ်နေ့တွင် နန်းတော်သို့ ပင့်၍ ဆွမ်းကပ်ပွဲ ပြုလုပ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ပြည်မြို့မှ ပညာတတ်ဆရာတော် အများအပြား ပါရုံမျှမက လာရောက်ကြသော မှူးမတ်ပရိသတ် များလည်း နန်းတော်တွင်းဝယ် ပြည့်နက်နေခဲ့သည်။ ထိုပရိသတ် အလည်တွင် ပြည်ဆရာတော် တို့အား သတိုးမင်းစောက အင်းဝရွှေပြည်တော်က သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရဆရာတော်သည် ကျမ်းဂန်တတ်၏လော၊ မေးလျှောက်လေသည်။ ထိုအခါ ပြည်ဆရာတော်တို့က အရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ သူမြတ်သည် ကျမ်းဂန် မထောင်းတာ ရှိပေ၏၊ ဟု မိန့်တော်မူကြလေသည်။
ဤသို့ မိန့်တော်မူကြလျှင် သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရဆရာတော်က ငါ့ကိုပင် မထောင်းတာဟု ဆိုလေဘိသည်ဟု နှလုံးတော် ရှိပြန်၍ မထောင်းတာသည် မည်သို့သော စကားနည်း၊ ပါဠိလော၊ အနက်လော၊ ပါဠိဆိုလျှင် မည်သို့ အနက်ပေး၍ အနက်ဆိုလျှင် မည်သို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမည်နည်း၊ မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်သည့် ဝေါဟာရနည်း၊ဟု ပရိသတ်အလည်တွင် ရဲဝံ့စွာ ပြန်လည်မေးမြန်းတော်မူရာ ပြည်ဆရာတော်တို့လည်း မည်သို့မျှ ဆိုနိုင်ခြင်း မရှိကြဘဲ ဆိတ်ဆိတ်သာ နေကြလေတော့သည်။ ထိုအဓိပ္ပာယ် သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရသူမြတ်က မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပေးသည်ဟူ၍ကား အမှတ်အသား မတွေ့ရပေ။ ပြည်ဆရာတော်တို့ထံက စကားပြန်မရသော ကြောင့် ဖွင့်ဆိုပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့ဟန်တူပေသည်။
ဆရာတော်သည် ပြည်ဘုရင်ထွေးအား သံဝရမင်းသားနှင့် ပုံပြုခိုင်းနှိုင်းကာ စပ်ဆိုတော် မူပြီးလျှင် နိဂုံး၌လည်း ဆင်ဖြူရှင်သား၊ မင်းတရားကို၊ စိတ်ဖျားလိမ္မာ၊ ပွားစိမ့်ငှာလျှင်၊ ဤစာကျေးဇူးဆပ်သတည်း။ ဟု ဘုရင်ထွေးအတွက် ရည်ညွှန်းချက်တို့ကို တိကျစွာ ဖော်ပြစပ်ဆိုတော်မူလေ သည်။
♥♥ရေးသူ♥♥ LA MIN AUNG ♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 10:59 PM0comments
Meber ၀င်ခဲ့ ပါဗျာ....
မိတ်ဆွေတို့ ဖုန်းမှ ဖတ်လိုပါက Download လုပ်ယူရန်
မောင်လမင်းအောင်(သုတစွယ်စုံ)မှာ အသစ်တင်တိုင်း Facebook ပေါ်ကဖတ်ချင်ရင် Like ကိုနှိပ်ခဲ့ပါ
ရှင်မဟာသီလဝံသ ============= မြန်မာ့စာပေသမိုင်းတွင်”သဒ္ဒါမှာ ရှင်မဟာကစ္စည်း၊ ကဗျာမှာ ရှင်မဟာသီလ၀ံသတည်း” ဟူ၍လည်းကောင်း”ပါရမီ မသီနှင့်” ဟူ၍လည်း...
ဘလော့လင့်လေးတွေမှာ ကြယ်လေးတွေပေါ်တာလိုချင်ရင်..... ၁။Design ၂။Edit HTML ကိုသွားပြီးအောက်ကCodeကိုရှာပါ။ </head> တွေ့ပြီဆိုရ...
သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ============== သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရ အရှင်မြတ်သည် မြန်မာ့စာပေသမိုင်းစဉ်တွင် ထိပ်တန်းပညာရှင် တစ်ပါး ဖြစ်တော်မူ၏။ ဆရာတော်သည် မိမိမွေးဖ...
(၁) တာဝတိံသာ၊ နတ်ရွာလော၊ နတ်ရွာလော။ ဟုတ်တည်း ရှင်ချင်းရှင်ချင်း၊ ဟုတ်တည်း ဆွေရင်းဆွေရင်း၊ ဟုတ်တည်း သည်ရင်း* သည်ရင်း။ မြင်စိုင်းဟူသည်၊ ရွှေ...
ရှင်တေဇောသာရ ရေးသွင်းသော မေတ္တာစာ
ဒုတိယမင်းခေါင်လက်ထက် ရှင်တေဇောသာရသွင်း မေတ္တာစာ မြင်းမိုရ်သဏ္ဍန်၊ နှိုင်းသင့်ရန်သည်၊ ယုဂန်တောင်နီး၊ လေခရီးဝယ်၊ ဓီးဓီးဆိုဝန်း၊ ပြုဗ္ဗာစွန်...
၁။ ရွှေနှင့်ယိုးမှား၊ အချင်းငယ်၊ အမည်မသိ၊ ရေးခဲ့တယ်၊ ပုဂံခေတ်မှာကွယ်။ ၂။ မြင်းစိုင်းရွှေပြည်၊ ကာချင်းသစ်၊ ပင်းယခေတ်မှာ၊ စပ်ဆိုဖြစ်၊ ငါးစီးကျေ...
(၁)ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအသစ်များ ညှပ်နည်းချုပ်နည်း (စိန်စိန်ဦး) http://www.mediafire.com/ ?olbp6848l3ess6j (၂)ခေတ်ရှေ့ မပြေး၊ ခေတ်နောက်မကျ...
လယ်တောကပြန် ပန်ချင်တယ်ခရေဖူးဆိုလို့မောင်ခူးကာပေး။ မနက်တုန်းဆီက၊ ကြော့ဆုံးကိုမောင်မြင်တော့၊ သူ့ ဆံပင် နှင်းဆီပွင့်တွေနဲ့ ၊ ဂုဏ်တင့်တယ်လေး...
မချစ်လို့ လမ်းခွဲခဲ့ တာမှ မဟုတ်တာ တကယ်ဆို ငါတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်ကို မရှိခဲ့ တာပါ
မင်းလည်အပျော် ရည်းစာ ငါလည်တာဝန်အရပဲလေ လူကြီးတွေရဲ့စီမံမူ မင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မူအတွက် "ချစ်တယ်"ဆိုတဲ့ စကားကို အသက်မပါဘဲ ထပ်ခါ...
မြန်မာစာပေ အရေးအသား၏ အစမူလကို ရှာဖွေလျှင် ကျောက်စာကို တွေ့ရှိရသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ကျောက်စာသည်ကား မြန်မာစာပေ၏ အုတ်မြစ်ကြီးသဖွယ်ပင်တည်း။ ထိ...
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ။ မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ဆရာတော်အား ပထမတန်းစား ပျို့ကဗျာများကို သီကုံးရေးဖွဲ့သူ ပျို့စာကျော်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ကြသည...
ကျွန်တော်မနှစ်က ဘောဒါတစ်ခုမှာ သွားနေသဗျ။ ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းနှင့်ကပ်လျက်တစ်ခန်းနေသူက ကျွန်တော်အိမ်မပြန်ခင်မှာ လာပြီးရင်ဖွင့်သဗျ။ သူက ကွ...
တစ်ခါက..ပြည့်တန်ဆာမတစ်ယောက်ဟာပြည့်တန်ဆာမှုနဲ့တရားရုံးတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်..တရားခွင်မှာ တရားသူကြီးက.. "ဟဲ့..တရားခံမ နင့်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ&...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေကို အာမခံနဲ့ ကုသပေးနေတဲ့ အရမ်းကိုတော်တယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အထူးကု သမားတော်ကြီ...
ပီမိုးနှင်း (ကာမသိဒ္ဓိကျမ်း) ဒီမှာဒေါင်းပါ
ဖတ်မီ၊ ရယ်မိ၊ ဟားမီ ဟာသကဗျာများ
နှစ်ပေါင်ကြားမှာလ အလုံးကို ငြိမ်အောင်ထားပါလို့ အရင်းအဖျားတုတ်ပါတဲ့ ကိုယ့်ဟာကြီးနဲ့ တည့်တည့်ချိန် ခါးလေးကိုလိမ် ဖင်ပိန်ကိုလှည့်ပေး အဖု...
cbox လေးထဲမှာ အမှတ်တရ အမှာစကား လေးများ ပြောကြားခဲ့နိုင်ပါသည်
ပထမနှစ် - မြန်မာစာအထူးပြု
ဒုတိယနှစ် - မြန်မာစာအထူးပြု
တတိယနှစ် - မြန်မာစာအထူးပြု
စတုတ္ထနှစ် - မြန်မာစာအထူးပြု
နုနုရည်( အင်းဝ) (1)
မိုမိုး ( အင်းယား ) (1)
Email ထားခဲလေ..ပို့ ပေးလိုက်မယ်
ရှေးဦးသဝေ၊ မလဲရေးချာ၊ ငလျင်သတ်နှင်း၊ လရေးပီမူ၊ မလည်ကူရ်ျ၊ င ကိုတဖန်၊ တံခွန်ထူပြီး၊ ၀တ်ရည်နှစ်မြွှာ၊ ရှေ့ ကဖြာသည်၊ မဝေးသဝေ၊ အ,လဲပ...
ပန်းအိုး ၄ အိုး၊ ပန်းပွင့်၃ ပွင့်
တစ်နေ့ ပပနဲ့ဥာဏ်စမ်းကစားကြပါတယ်..သူမေးတာကျွန်တော်ဖြေ၊ ကျွန်တော်မေးတာသူဖြေပေါ့ ကျွန်တော်သူနဲ့ တွေပြီးမှကိုယ်ကိုယ်ကိုညံမှန်းသိလာပါတော...
ကိုယ်ခံပညာ နှင့်အားကစားဆိုင်ရာစာအုပ်များ (၁၆ အုပ်)
(၁)သိုင်းပြောင်းပြန် ပြောင်းပြန်မောင်လေး (ပွင့်လန်း-သတ္တုတွင်း) (ပ+ဒု စဆုံးပေါင်းချုပ်) http://www.mediafire.com/ download/8zr9uq8w77ed444/ ...
'ယခုလတွင် ရေးသားခဲ့သမျှ ပိုစ်များ September (16) October (5) November (6) December (16) January (18) February (16) March (9) April (7) July (1) August (1) October (7) November (2) December (2) January (7) February (3) March (4) April (4) May (2) July (4) August (1) September (2) October (25) November (1) January (5) March (2) August (115) September (5) December (13) January (10) March (1) May (1) November (17) December (1) August (8)
facebook အကောင့်ဖြင့် Like ခဲ့ ပါ
ထီပေါက်စဉ် ဂဏန်း တိုက်ရန်
မောင်လမင်းအောင်(mglaminaung@gmail.com). Theme images by UteHil. Powered by Blogger.